तुलसीपुर खानेपानी अपडेट : ३६०० मतगन्दा कस्को मत कति ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	तुलसीपुर खानेपानी अपडेट : ३६०० मतगन्दा कस्को मत कति ? » Nepal Fusion
तुलसीपुर खानेपानी अपडेट : ३६०० मतगन्दा कस्को मत कति ?
दाङ २०७८ पुष १८ गते आइतवार
तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको नयाँ नेतृत्वको लागी हिजो भएको निर्वाचनमा मतगणना जारी छ ।
हिजो साँझ देखी सुरु भएको जारी मतगणनामा पछिल्नो विवरण अनुसार अहिले सम्म ३६०० गणना भएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ । जम्मा मतदाता संख्या सात हजार ४ सय ६७ रहेकोमा हिजो भएको मतदानमा चार हजार चार सय पाँच मत खसेको समितिले जनाएको छ । समितिका संयोजक पुस्कर भण्डारीका अनुसार ३६०० मत गणना हुदा संस्थाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार यमकान्त भण्डारीले .१६२२.., पवनराज बुढाथोकीले१४५० र दिपक कुमार धितालले .२२९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
यस्तैगरी उपाध्यक्षमा सीताराम शर्मा आचार्यले १८५२ गिरीधारी प्रसाद पौडेलले १२२१ पूर्णप्रसाद धितालले ५६ , सचिबमा सेवकराम भण्डारीले २३३८ दामोदर लामीछानेले ५६२ , कोषाध्यक्षमा भद्रबहादुर वलीले १२७४ भोलाप्रसाद थापाले १३८७ , मेघराज न्यौपानेले २४९ , कर्ण बहादुर वलीले ६९ , सदस्यहरुमा लक्ष्मण केसीले २१२३ , पदमबहादुर खड्काले १७२२ र सोविन्द्र चन्दले १०५२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । गएराती ९ बजेदेखी मतगणना सुरु भएको हो । दुई स्थानबाट रातभर निरन्तर रुपमा मतगणना भईरहेकोमा विहान सात बजेदेखी मतगणना स्थान थप गरिएको छ ।
दुई स्थानबाट मतगणना हुदा ढिलाई भएको भन्दै अहिले गणना स्थल थप गरिएको समितिका संयोजक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । अहिले तिन स्थानबाट गणना भईरहेको छ । समितिका संयोजक भण्डारीका अनुसार दिउँसो १२ बजे सम्म अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ ।